तिमीलाई देखेर आँखा त्यहिं छोडि हिंडे म...
आँखाले नदेख्नेहरुको कथा (अडियो सहित)
प्रकाशित मिति: 2017-01-10
काठमान्डु । भेट भयो । मैले देखें । उहाँले देख्नु भएन ।
खाईलाग्दो ज्यान । जाडोको समय । उहाँलाई ज्याकेट र जिन्सको पाईन्ट चट्ट सुहाएको थियो ।
जन्मघर सुनसरीको प्रकाशपुर । अहिले ललितपुरको नख्खुमा बस्नुहुन्छ । ट्याक्सी चढेर आफ्नो सांगितिक जीवनको अन्तरकुन्तर खोल्न सीआईएनको स्टुडियोसम्म आईपुग्नुभएको थियो प्रकाश तिमल्सिना ।
अहिले प्रकाश तिमल्सिनाको आवाजमा दर्जनौं गीत रेकर्ड भएका छन् । गीत गाउनकै लागि १९ देशको यात्रा पनि गरिसक्नुभयो । आजभोली गाएरै गुजारा चलेको छ । तर सानो बेलामा चक्लेट पाउने लोभले गीत गाएको सम्झना छ उहाँलाई । त्यसवेला रामकृष्ण ढकालका गीतहरु खुबै मन पर्थे ।
उहाँ जन्मजात दृष्टिविहिन । त्यसैले बच्चै बेला देखि उहाँको साथी रेडियो थियो । रेडियोमा बजेका गीत बिस्तारै प्रकाशको ओंठमा झुन्डिन थाले । न कोही गुरु छन्, न त कहिल्यै संगितको कक्षा नै लिनुभयो । तर पनि प्रकाश तिमल्सिनाको आवाज सुनेर मोहित नहुनेहरु सायदै होलान् । उहाँले उपहारकै रुपमा पाउनुभएको छ, कला र गलामा निखारता ।
चाहना भए सिक्ने बाहना कत्ति कत्ति ? दृष्टिविहिन भएर के भयो र ? प्रविधीले सजिलै बनाईदिएको छ आजभोली । उहाँ युट्युव र गुगल लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट संगितको ज्ञान लिनुहुन्छ ।
गाउँदै र सिक्दै साउथ एसिएन सुपरस्टारसम्म पुग्नुभएका प्रकाश जीवनमा सबैभन्दा खुशी भएको क्षण पनि त्यहि भन्नुहुन्छ । उहाँले त्यहि खुशीको वहानामा अर्को एउटा गीत सुनाउनुभयो । त्यहि गीतले उहाँलाई नेपाली सांगितिक क्षेत्रमा परिचित गराएको हो । गीतको बोल थियो, प्रिय तिम्रो सिउँदोमा सिन्दुर भर्न देउ...
जीवन भोगाईमा दुखका स्मृतीहरु पनि ताजै छन् । कतिपय संगितकारले गर्ने व्यवहार र आफु दृष्टिविहिन भएकाले समयमै तय गरिएका कार्यक्रममा पुग्न नसक्दा दुख लाग्ने प्रकाशको अनुभव छ ।
उहाँ करिव १० वटा अन्य भाषामा पनि गाउन सक्नुहुन्छ । २३ वटा भाषामा गीत गाएर विश्व रेकर्ड राख्ने उदेश्यसँगै उहाँलाई कहिल्यै नदेखेको संसार पनि हेर्न मन छ । त्यसका लागि उहाँ रकम जुटाईरहनुभएको छ ।
उहाँले आउँदो एल्वमको गीत सीआईएन मार्फत पहिलो चोटी सार्वजनिक गर्नुभयो । २० मिनेट गफिने भनेर स्टुडियो छिरेका हामी एक घण्टा बढि गफियौं । छुट्ने बेलामा उहाँको अर्को कला पनि पोखियो बाँसुरीको धुन बनेर । गीतमा कला भर्ने गला छँदै छ, बाँसुरीमा भरिएको धुन उस्ते मिठो ।
गायक प्रकाश तिमल्सिनाले संसार देख्नुभएको छैन । उहाँलाई संसार हेर्ने रहर छ । अनि रहर छ एक वर्षअघि जीवनको साहारा बन्न आईपुग्नुभएकी श्रीमतिको ओंठमा मुस्कान हेर्ने ।